သင့်ရဲ့ တွေးခေါ်မှုနှုန်းကို တိုးတက်စေမယ့် ပဟေဠိဥာဏ်စမ်းလေးများ – Trend.com.mm
Posted on March 16, 2018 by Wint
ဒီဥာဏ်စမ်းလေးတွေက သိပံ္ပပညာရှင်အချို့ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအားကို တိုးတက်စေရုံမက တွေးခေါ်မှုစကေးကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက်တင်မဟုတ်ဘဲ လူကြီးတွေအတွက်ပါ အကျိုးရှိစေမယ့် ဥာဏ်စမ်းလေးတွေဖြစ်တာကြောင့် ပျော်ပျော်ကြီး ဖြေကြည်လိုက်ရအောင်…
အဖြေက လွယ်ပါတယ်နော်။ ကြည့်တာနဲ့ သိသာပါတယ်။ အခြားခွက်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် paper clip ထည့်ထားတဲ့ခွက်က ရေအများဆုံးဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ဖန်ခွက်ထဲက ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒုတိယမြောက်ခွက်ကရေတွေက အများဆုံးဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်ဘက်မှာ ပြထားတဲ့ အစားစာတွေကို ညာဘက်က ရှုပ်ပွနေတဲ့ အစားစာပုံထဲမှာ ရှာနိုင်လား
ပုံထဲက အချိုးကျကျ cross ဖြစ်နေတဲ့ လိုင်းတွေက ဘယ်မှာလဲ?
ဒီအခွေနှစ်ခုထဲက တစ်ခုမှာ သီခြားဖြစ်နေတဲ့ အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုကို ရှာပါ
ပုံထိပ်မှာပြထားတဲ့ လေးဖက်ချွန်ကြယ်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုး တွေ့အောင်ရှာကြည့်ပါ..
အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်နေတဲ့ အသည်းပုံလေးခုရှိတယ်.. ဘယ်နားမှာများလဲ ?
A ခရားအိုးထဲမှာ လက်ဖက်ရည်ခွက်ပေါင်း ၃၂ ခွက်စာပါတယ်။ ဒါဆို B ခရားအိုးထဲမှာ လက်ဖက်ရည် ဘယ်နခွက်စာရှိမလဲ ?
Bခရားအိုးရဲ့ နှုတ်ခမ်းက A အိုးရဲ့ တစ်ဝက်လောက်သာရှိလို့ တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် B အိုးမှာ လက်ဖက်ရည် ၁၆ခွက်စာပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။